Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh!
Salaantaa kadib, waxaan salaan gaar ah u dirayaa bahda Somaliweyn oo suurta gelisay inay soo bandhigto wax aan soomaalida ka suurta gelin, balse loobaahanyahay oo ah in qofkasta fikraddiisa loo ogolaado inuu golahan soo geliyo. Mid caytamaya, mid ducaynaya, mid wax tilmaamaya, mid wax hagaajinaya, iyo aragti kasta oo ka soo maaxata dadka soomaaliyeed gaar ahaan qurba joogga ama qaxaatiga dal-laawaha ah oo dan-laawe ku darsaday.
Waxaan halkan mahad ballaadhan uga soo jeedinayaa Cabdillaahi oo golaha soo dhigay maqaal aad u qoto dheer oo qofkii garasho dheer lihi uu garan karo meelaha uu ka hadlay iyo qardoofooyinka horyaalla midnimada Soomaaliyeed, waxaase hubaal ah in walaalahayga soomaaliyeed aanay sidaa u wada arag, taasina la yaab malaha oo aragtida waa lagu kala duwanaan karaa, ceebna maaha ee cayda ayuunbaan meesha qaban, sida dad badani soo geliyaan golahan Somaliweyn.
Aan u soo daadego qoraalkayga, marabo inaan dib ugu noqdo qoraalkii cabdilaahi Cawad, balse aan waxyar ka soo qaato, gaar ahaan midnimada soomaaliyeed. Erayga midnimo, waa eray tilmaamaya, wada jir iyo iskaashi, in la iska dugsado wixii dhibaato ah, in la wadaago dhib iyo dheef, isku soo wada duuboo waa eray qaali ah, balse haddii la waayo waxa loo maraa wejiyo badan oo kolba mid lagu dayo, iyadoo lagu darayo dulqaad, is-fahan, garawshiiyo iwm, waayo eraygu maaha mid fudud ee waa mid ballaadhan oo la rabo inuu qanciyo dhammaan inta midoobaysa, maaha eray af-ka baarkiisa ah, mana aha wax laysku qasbi karo.
Midnimada Somaliweyn waxay ahayd mid loo soo maray halgan dheer oo wejiyo badan lahaa, waxa laga hayaa ilaahay ha u naxariisto'e "Faarax Oomaar" "Dalkayagu ma qaybsami karo, mana ogalaan karno taako naga mid ahi inay naga go'do" waa xilligii halganka soomaalidu soo ifbaxay, waa sannadihii soddonaadkii, gaar ahaan Farax Oomaar waxa uu ahaa halyeygii bilaabay qalin-kudirirka, kuna mutaystay in la xidho oo markii danbena laga mustaafiriyay dalkaba. Madaxweynihii ugu horreeyey ee Jamhuuriyaddii Somaliya, mudane Adan Cabdulle Cismaan isagaoo ka hadlaya, midnimada soomaaliyeed, markii uu ahaa madaxweynaha waxa uu yidhi " dastuurka soomaalida, waxa ku yaalla in aanu isu keeno qaybaha soomaalida ka maqan ee ah Jabuuti, Soomali galbeed iyo NFD, wuxuuna hadalkiisa ku daray, in xukuumadda soomaalidu ku raadin doonto, wadahadal, balse haddii ay ka fursanweydo lagu raadin doono xoog"
Maxaa ka danbeeyey? Akhristoow, waxaad iiga markhaati furaysaa in ay soomaalidu soo martay xaalado farabadan oo markastaba ay ka sii dhacaysay, soomaalinimadii, iyo midnimadii lagu riyoonayay, waxaana la soo gaadhay xilli lakala dhaqaaqay. Hadaba siyaasiyiinta maanta soomaalida horboodaysaa, ma yihiin kuwii midnimada ka shaqayn lahaa? ma yihiin kuwo awood u leh inay soo celiyaan wanaagii soomaaliyeed? waa maya, oo waxaanaad uguba daalin mid kastaba waxaad eegtaa, deegaanka uu ka soo jeedo, tusaale ahaan Cabdiqasim oo ilaa maanta laga furfuri la'ayahay anigaa madaxweyne ah, miyaanay habboonayn inuu midnimada ka soo bilaabo hoosta, inta uu u hanqal taagayo inuu madaxweyne u yahay Hargeysa iyo Burco. Tusaale ayuunbaan u soo qaatay ee Cabdiqasim kama duwana siyaasiyiinta maanta oo mid kastaba deegaankiisii uu u baahanyahay midnimo.
Aan ku soo noqdo midnimada soomaaliyeed, waxaa hubaal ah in ay jiraan waxyaabo aan u baahnayn in loo ololeeyo, balse lagu midoobo. Soomaalidu waxay ku midaysantahay afka soomaaliga, diinta is-laamka, wixii intaa dheer waa in loo maraa jidka toosan, ee maaha in la is xagxagto, maaha in la isku dayo muquunin, taasoo keenta kala daadasho iyo in cadaw badan ka faa'iidaysto. Midnimadii uu Adan Cabdulle cismaan ka hadlayay, waxaa ka mid ahayd Jabuuti, "ila jiid jabuuti" meeday Jabuuti? horta haba joogaan kuwa kale ee NFD iyo Somaligalbeed, ee midnimo doonoow, walaakayga midnimada jeceloow ma ka hadhay jabuuti? uma jeedo xoog halagu keeno, oo taa horaan uga afeef dhigtay oo midnimo xoog kuma timaado, ee waa rabitaan sida Yurub oo aan is-ku af ahayn isku diin ahayn ay isu doonayaan, iyaga ayay ka timi, sida Norway u diidayna waa loo ogolyahay oo iyadaa xaq u leh, balse waxaan u jeedaa ma la isku deyey in Jabuuti la yidhaahdo Somaliweyn ayaad ka mid tahay ee midnimada horseed ka noqo oo maanta isu keen dadka soomaaliyeed? jawaabtu waa maya.
Halkaa markaan marayo waxaan xasuustay qaaciidadii walaalkeen badka soo dhigay ee ahayd:
MS -I =SW waxaa ii muuqata taniyo lixdankii in midnimadu ay ku soo noqnoqonayso ku xumee, baabi'i, dil, xadhig, xoog, muquuni, iwm. Waxay taariikhdu qoraysaa midnimada marka dadku doonayo inay fududahay, marka dadku aanay doonayna inaan laheli karin ilaa loo maro jidkeeda wanaagsan. Lixdankii waxa midoobay Somaliland iyo somaliya, yaa isku khasbay? dadka ayaa is-doonayay, waxaadse ogaataa, wixii ka soo baxay midnimadaasi inay keentay burbur iyo caddaalad darro, waana ta maanta keentay kalayaaca. Ugu danbayn aan soo gunaanado, qoraalkayga, midnimadu waxay ka timaadaa gunta, tusaale ayaan ku siinayaa ee indhaha ku ballaadhi.
Somaliland waxay ka mid tahay shanta qaybood ee Somaliweyn, ee riyadeennu ahayd, waxaa ka amar kutaaglayn jiray Saancaddaale, wuxuuna ka guuray somaliland 26-06-1960-kii dhawr maalmood kadibna waxa lagu dhowaaqay "Jamhuuriyadda Somaliya" oo ka koobnayd Somaliland iyo Somaliya, dhibaatooyin aan la soo koobi karin kadib, waxaa la soo gaadhay xilli aan la is-aaminin, waxaa la soo gaadhay xilli laba beelood oo wada deggani aanay is-bixin, gaar ahaan beelihii ay xukuumaddii M S Barre xoogga saartay ee ka soo jeeday Somaliland, waxa la isugu dhiibay hub waxa lakala dhex dhigay kala shaki iyo dagaal aan garawshiiyo lahayn.
Kugu dhimay oo kaa dhimay, waa huq
Rati heeryadiisa ku foofay
Hungo waa sidaan ahay maanta
Dhanna heedhe iima fayooba.
Anigaa colaada ku hoobtay
gacalkaygii-baa is-wada heeray
Qoriyahaw hawaawi dhacaagu
Jugtu waa waxaan la hagaasay
Qoriyahay Hargaysiyo Juba
Qoriyahaw halkaad cuskataaba
Waa haar jidhkayga ku taalla.......................Mohamed Xaashi Dhammac "Gaarriye" 1984kii
Waxa la soo gaadhay markii Xukuumaddii S Barre kala carartay, ee la isugu soo baxay banaan aan lahayn xeer iyo xakamayn iyo maamultoonna. Waxa isu yimi beelaha isu-oodda dhow ee dega deegaankii Somaliland, waxayna isla afgarteen walaalnimadoodii inay boodhka ka tumaan, midnimo inay halkaa ka unkaan, gaar ahaan qaybtii la odhan jiray somaliland ee xorriyaddeeda qaadatay 26-06-1960, sidaas ayaa gacmaha la isku saaray. dad badan ayaa ka biyo diiday go'aankaa gaar ahaan intii midnimada Somaliweyn jeclayd, balse aan qiimayn karayn xaaladda lagu jiro iyo halka ay sii socoto midnimadii, waxaase marag madoonto ah, inay somaliland noqoto, meesha keliya ee ugu nabdoon deegaankii la siku odhan jiray "Jamhuuriyadda Somaliya" halkii loo ducayn lahaa ee lagu ammaani lahaa dedaalka ay sameeyeen beelaha ka soo jeeda Somaliland ayaa loogu abaal guday cay, af-lagaaddo, taasoo dadka loogu macneeyay in Beesha la yidhaa Isaaq ay doonayso xukunka inay isu dhiidhiibto.
Waxa kaloo laga dhigay wax aan jirin dhibaatadii soo gaadhay bulshaweynta reer Hargeysa, Burco iyo Berbera , siddeetamaadkii oo marmarka qaar Somaliweyn jacaylku ku tilmaamaan, inay Isaaqu sheegaan waxaan jirin iyo dhib aan loo gaysan sida Yuhuudda "qaaq" waar hadalku qadhaadhaa, sidaasan weliba midnimo ku raadinayaa, waayaab. waxa beenawday aragtidii ahayd beel keliya ayaa xukun u bukta, waxa dharaar cad la doortay oo Ceerigaabo, Berbera, Burco, Hargeysa ilaa Boorama laga soo doortay Dahir Rayale oo aan ka soo jeedin beeshii la lahaa midnimada waxay uga cararysaa xukun doon, waa yaab. Jawaabkale ayaa ka timi midnimo jacaylkii oo waxay leedahay Isaaqu iyagoo isku xumaynaya ayay u doorteen Dahir Rayaale, waa yaab waar miyaan garawshiiyoba jirin, sidaasaad midnimo ku doonaysaa!. Waxaase marag madoonto ah in maanta aanay soomaalida kale ka suurtoobaynin ta ka dhacday Somaliland "maaha faan" ee waxaa habboon in lagu daydo, si loo gaadho maamul xalaal ah oo aan loo eegin beel.
Jabuuti waxa madaxweyne ka noqday Xasan Guuleed abtidoon, wuxuu ka soo jeedaa beesha ciisaha, waana Mamaasan, waxa bedelay inankii uu adeerka u ahaa oo ah Cumar Geelle, oo Mamaasan sii dhaaf weliba, oo Xasan Guuleed ayaa u adeer ah, doorashadii ugu danbaysayna waxa la yidhi 100% ayuu helay waa yaab. Ilaa la helo jidka loo mari lahaa Midnimo soomaliyeed ubadkeennu ma helayaan wax looga tago iyo wanaagtoona. Haddii xaalku yahay sida Cabdillaahi Cawad Sheegayna oo qaaciidadaa lagu gaadhi karo midnimo MS-I= SW, dee! taa hala fuliyo, waa haddii xalku sidaa yahay oo yaan loo daahin ee innoo diyaariya hubkii, iyo xilligii, iyo xoolihii aynu ku fulin lahayn.
Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh!
Kala xiriir: bulhan2010@hotmail.com